ပင်မစာမျက်နှာ / ဘ‌‌လော့ခ် / Leaky Faucet? Rusty? ရေကနှေးနေသလား။ ၎င်းကိုမည်သို့ပြုပြင်ရမည်နည်း
2020 / 10 / 21 အမြိုးခှဲခွားခွငျးဘ‌‌လော့ခ် 2874 0
ပိတ်ဆို့ခံ Faucets ကော။
/ ဘုံဘိုင် unclogging /
တစ်နှစ်လျှင် ၃၆၅ ရက်၊ အထူးသဖြင့်ရေပူကိုပုံမှန်အသုံးပြုသောရေပိုက်တစ်ခုသည်မလွှဲမရှောင်ထုထည်နှင့်ပိတ်ဆို့ခြင်းဖြစ်လာလိမ့်မည်။ အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ faucet မှထွက်လာသောရေသည်သေးငယ်။ သေးငယ်လာသဖြင့်၎င်းသည် faucet အသုံးပြုခြင်းအတွေ့အကြုံကိုများစွာအကျိုးသက်ရောက်သည်။
၅ မိနစ်အကြာတွင် faucet ကိုပြန်ဖွင့ ်၍ ကြည့်ပါကရေစီးဆင်းမှုသည်ချက်ချင်းကြီးလာသည်။
/ ရေပန်းခေါင်းမှခုတ်ပစ်ခြင်း /
ပလတ်စတစ်အိတ်၌အဖြူရောင်ရှလကာရည်အနည်းငယ်သောက်သုံးပြီးရေခေါင်းကိုမိနစ် ၃၀ ခန့်ပတ်ထားပါ။ ရေချိုးခန်းခေါင်းသည်အသစ်ကဲ့သို့ကောင်းလိမ့်မည်။
/ Sinks များကို unclogging /
နစ်မြုပ်စွာမတော်တဆပိတ်မိလား စိတ်မပူပါနဲ့၊ အဖြူရောင်ရှလကာရည်နဲ့ဆိုဒါမုန့်ကို ၁း၁ အချိုးနဲ့စုပ်စက်ထဲထည့်ပါ။
သေးသေးလေးတစ်ခုသို့မဟုတ်ပလတ်စတစ်ပုလင်းတစ်လုံးကို faucet ၏ရှေ့တွင်ထည့်ပြီးရေကိုအလွယ်တကူဖမ်းနိုင်သည်။
/ လက်ဆေးရန်လွယ်ကူသည် /
အကယ်၍ faucet သည်အိမ်ထဲတွင်အလွန်ဝေးလွန်းပါကသင်၏လက်ကိုဆေးရန်အဆင်မပြေပါ။ အသုံးပြုသောပလပ်စတစ်ပုလင်းများကိုအနည်းငယ်ပြောင်းလဲခြင်းဖြင့်ဤပြeasilyနာကိုသင်အလွယ်တကူဖြေရှင်းနိုင်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏မိတ်ဆွေအချို့သည်အိမ်၌သူတို့၏ရေချိုးခန်းများ၌ဟောင်းနွမ်းသောရေပိုက်များကိုသုံးကြသည်။ ၄ င်းတို့ကိုဂရုတစိုက်မထားလျှင် ၄ င်းတို့၏ခန္ဓာကိုယ်တစ်လျှောက်လုံးတွင်တပ်ဆင်ထားသည်။ ပလတ်စတစ်ပုလင်းကပြsolveနာကိုဖြေရှင်းပေးနိုင်တယ်။
ပထမ ဦး စွာပလပ်စတစ်ပုလင်း၏ထိပ်တစ်ဝက်ကိုအမှတ်အသားပြုပြီး၎င်းကိုကိရိယာတစ်ခုဖြင့်ဖွင့်ပါ။
မှတ်တမ်း: ပလပ်စတစ်ပုလင်းကိုအရင်အမှတ်အသားပြုလိမ့်မယ်။ ထိုအခါကိရိယာတခုနှင့်အတူကဖြတ်။
ကူးယူချက် - မှတ်စု: ပါးစပ်ကွင်း၏နေရာကို faucet အရွယ်အစားပေါ် မူတည်၍ ဖြတ်နိုင်သည်သို့မဟုတ်မဖယ်နိုင်သည်။ ဖြတ်တောက်ပြီးနောက်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကြမ်းတမ်းသောအနား (လက်များကိုဖြတ်တောက်ခြင်းကိုကာကွယ်ရန်) ကတ်ကြေးများကိုအသုံးပြုသည်။
ပြီးရင်ပလပ်စတစ်ပုလင်းအဖုံးကို faucet နဲ့တွဲလိုက်ပါ။
မှတ်တမ်းများ - ဖြတ်ထားသောပလပ်စတစ်ပုလင်းကို faucet ပေါ်တွင်တင်လိုက်သည်။
အဝတ်လျှော်ခြင်းများမှုတ်ထုတ်သည့်အခါရေစီးဆင်းမှုကို arc တစ်ခုရှိစေရန်ရိုးရိုး faucet ဒိုင်းလွှားတစ်ခုပြုလုပ်လိမ့်မည်။ ထို့အပြင်ရေစီးဆင်းမှု၏လမ်းကြောင်းကိုလည်းထိန်းချုပ်နိုင်သည်။
မှတ်တမ်း: ဒါကပါပဲ။ သင်မြင်သည့်အတိုင်းရေစီးဆင်းမှုသည်ကွေးနေပြီးအရာဝတ္ထုများကိုဆေးကြောရန်ပိုမိုလွယ်ကူသည်။
Leaky Faucet ကိုဘယ်လိုပြင်ရမလဲ။
ပျက်စီးယိုယွင်းနေသောအပြင်ပိတ်ဆို့ခြင်းအပြင်အခြားပြproblemsနာများလည်းရှိသည့် Faucets များသည်ယိုစိမ့်မှုဖြစ်သည်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို leaky faucet ဘယ်လိုပြင်ရမလဲ။
ပထမ ဦး စွာ faucet ၏ထိပ်ရှိပလပ်စတစ်အဖုံးကိုဖွင့်ပါ။ ထို့နောက်အောက်ရှိ screw နှစ်ခုကိုဖွင့်ပါ။
မှတ်တမ်း: သင်ဖွင့်လိုက်တဲ့အခါ, သင်ဝက်အူမြင်သည်။ ငါတို့ဝက်ဆိုက်ကိုဖွင့်လိုက်တယ် faucet လက်ကိုင်ပေါ်ရှိပလပ်စတစ်အဖုံးပြားကိုဖယ်ထုတ်ပါ။
သင် screw နှစ်ခုကိုဖွင့်လိုက်သည်နှင့် faucet ၏လက်ကိုင်ကိုဖယ်ရှားလိုက်ပါ။
မှတ်တမ်းများ - ဝက်အူကိုဖွင့်လိုက်တာနဲ့ငါတို့ faucet လက်ကိုင်ကိုချွတ်လိမ့်မယ်။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့, အ screw နှစ်ခုတင်းကျပ်ရန် tool ကိုအသုံးပြုပါ။ များသောအားဖြင့် faucets များသည် screw များဖြုန်းနေသောကြောင့်ယိုစိမ့်ခြင်း၊
မှတ်တမ်းများ - လိမ်ဖဲ့ခြင်းနှင့်တင်းကျပ်နေသမျှကာလပတ်လုံးကျွန်ုပ်တို့သွားသင့်သည်။
/ ဖျက်သိမ်းခြင်း /
ကျန်ရှိသော ketchup ကိုမသွန်းလောင်းရန်၊ faucet ၏သံချေးတက်နေသောအစိတ်အပိုင်းများတွင် ketchup smear ပမာဏကိုနှစ်မြှုပ်ရန်၊ ၅ မိနစ်ခန့်ကြာပြီးနောက်စိုစွတ်သောအထည်ဖြင့်သုတ်ခြင်းမပြုရန်၊ သံချေးသည်သဲလွန်စမရှိဘဲချက်ချင်းစီးသွားသည်။ ။
/ ရေအစွန်းအထင်းများကိုဖယ်ရှားပါ /
သံပုရာတစ်ဝက်ကိုဖြတ်ပြီး faucet ကိုသုတ်ရန်၎င်းကိုအသုံးပြုပါ။ ၂ မိနစ်မပြည့်ခင်တွင် faucet သည်သန့်ရှင်းပြီးတောက်ပနေသည်။
ရှေ့သို့ :: တရုတ်မိသားစုများ၊ တတိယအကြိမ်ခွဲခြားခြင်းခံထိုက်သည်မဟုတ်လော နောက်တစ်ခု: ရေချိုးခန်းကြေးမုံပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်း၊ ၉၉% သောလူများသည်ဤအသေးစိတ်အချက်အလက်ကိုကြည့်ရှုမည်
2021 / 05 / 28 1617
2021 / 04 / 22 2144
2021 / 04 / 21 1905